Usuku lukaZwelonke kubukumkani obutsha baseSaudi Arabia buza kukhanya kwiLizwe lezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » Usuku lukaZwelonke kubukumkani obutsha baseSaudi Arabia buza kukhanya kwiLizwe lezoKhenketho
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • I-WTN
15 imiz efundwayo
OHloniphekileyo, Umphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia, uMnu Ahmed Aqeel AlKhateeb, wayengadanisi kuphela no-Edmund Bartlett, Umphathiswa Wezokhenketho eJamaica. Ungqungqa umdaniso wehlabathi wokhenketho.
Umhlaba ujonge iRiyadh ngoncedo, kwaye uncedo lusendleleni.
ISaudi Arabia inyuke ngexesha lobhubhane ngeendlela ezininzi.
USuku lweSizwe lwanamhlanje lusenokuba luSuku lweSizwe loKhenketho eSaudi Arabia kwihlabathi liphela.
USuku lweLizwe i-Saudi Arabia luhlala lubhiyozelwa NgoSeptemba 23rd.
Eyaziwa ekuhlaleni njenge-Al-Yaom-ul-Watany, iphawula nge-23 kaSeptemba 1932, xa uKumkani Abdulaziz wabhengeza ukumanyaniswa kwelizwe njengobukumkani.
Ubukumkani baseSaudi I-Arabia yasekwa ngo-1932 nguKumkani Abdulaziz (owaziwa njengo-Ibn Saud eNtshona).
Xa nabani na ebuzwa kwezi ntsuku malunga ne-Saudi Arabia, iingcinga ngohambo nezokhenketho zilingana neengcinga zeoyile kunye nobutyebi.
Oku kwakuhluke kakhulu ngaphambili xa ubukumkani buvulekele kuphela ukhenketho lwenkolo okanye loshishino.
Ukusuka "kungabikho ukhenketho", iSaudi Arabia ehlengahlengise kuyo yonke into malunga nokhenketho namhlanje.
ISaudi Arabia ayisiyena mdlali ubalulekileyo kuphela kwingingqi yokuhamba kodwa, ngaphandle kwamathandabuzo, ngomnye wabadlali ababalulekileyo behlabathi.
Ukusingatha ii-ofisi zengingqi ezinje nge-UNWTO, i-WTTC, ilizwe lichitha iibhiliyoni zeedola ukuze lihlangule icandelo lalo kuphela kodwa nokunceda ilizwe.
Iqela elinomdla laseSaudi ngu Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi phantsi kobunkokheli be HRH UGqr Abdulaziz Bin Naser Al Saud kunye noRaed Habbis ineyona Qela liQela leNgxoxo leWhatsApp elibonwayo ngoku eWTN.
ISaudi Arabia yayinethemba lokuba likhaya elitsha kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO). Ukuba nekomkhulu le-UNWTO eBukumkanini kuya kuyigxininisa imeko yelizwe jikelele njengenkokeli yezokhenketho kwihlabathi jikelele eSaudi Arabia.
Xa INkosana yaseSaudi Crown kunye ne-PM yaseSpain Ukuthetha kungabaluleka kwishishini le-UNWTO ukuyeka amabhongo ngoBukumkani. I-UNWTO izinze eSpain, inika uBukumkani baseSpain isikhundla jikelele kwezokhenketho, kunye nesihlalo esisigxina kwiBhunga eliLawulayo le-UNWTO.
Kubonakala ngathi uthethathethwano malunga nokuthintela intshukumo yi-Saudi Arabia ukunika i-UNWTO ikhaya elitsha ngoku iyaqhubeka.
I-Yurophu, iMelika, okanye i-China bayoyika ukuba iSaudi Arabia inyukela apho ihlala isilela khona, kodwa idala ithemba e-Afrika, e-Asiya, nakwiiCaribbean nakwezinye iingingqi.
Umphathiswa Wezokhenketho wase-Jamaica u-Edmund Bartlett wayevuya kakhulu nge-Saudi Arabia, ukuba Ohloniphekileyo uMnu Ahmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia wabonwa edanisa noEdmund Bartlett, Umphathiswa Wezokhenketho eJamaica kwilizwe likaBob Marley.
Ohloniphekileyo uMnu Ahmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia bedanisa noEdmund Bartlett, Umphathiswa Wezokhenketho eJamaica
Indawo ekubekwe kuyo ukhenketho lwehlabathi jikelele iyatshintsha ngokucacileyo, kwaye inokushenxisela eSaudi Arabia.
Alikho elinye ilizwe ehlabathini elibonise umbono onje ngeli candelo kwixesha elidlulileyo. Kukho okungaphezulu kombono, kukho imali, imali eninzi.
Xa iSaudi Arabia ivela entlanganisweni, kwingxoxo iba yinto ekugxilwe kuyo entlanganisweni okanye kwingxoxo.
Kwi-WTTC Sumit eCancun ngoMeyi ukubonakala komphathiswa wase-Saudi Arabia kukhokelele ekubeni umphathi we-WTTC uGloria Guevara ayeke umsebenzi kwi-WTTC. Ngoku ungumcebisi ophezulu kumphathiswa I-AlKhateeb, ehlala eRiyadh, kwaye ibhiyozela uSuku lweSizwe laseSaudi namhlanje njengommi waseMexico.
Kubonakala ngathi iyahamba kunye nomfanekiso welizwe elivulekileyo ngakumbi elilungele ukuqala ikamva elitsha eliqaqambileyo xa kufikwa kumba wokucoca umfanekiso wawo kwintengiso yehlabathi.
Namhlanje uBukumkani bubhiyozela iholide yabo yeSizwe- kwaye ngokuqinisekileyo le ikwayileholide ibaluleke kakhulu kwicandelo lezokhenketho nokhenketho kuyo yonke indawo.
I-Saudi Arabia idibanise imimandla emine yaba lilizwe elinye ngothotho lokoyisa ukuqala ngo-1902 ngokubanjwa kuka-Riyadh, ikhaya looyise losapho, iNdlu yaseSaud.
Unyaka ngamnye, uSeptemba 23 lithuba labemi baseSaudi lokubhiyozela ilifa labo lenkcubeko kwaye bajonge kwikamva. Ngexesha lombhiyozo wosuku lonke, izitrato kwilizwe lonke zigcwele luhlaza namhlophe-imibala yeflegi yaseSaudi eboniswe kwimizobo yeDoodle. Abemi banokubonakala behonjiswe kule mibala yokomfuziselo kwaye bebonisa iflegi yesizwe ezimotweni nakumakhaya abantu.
Ikhaya elazalelwa kubuSilamsi kwaye ngoku liphantsi kwenguquko kwezentlalo nezoqoqosho, uBukumkani baseSaudi Arabia babhiyozela usuku lwabo lokuzalwa lwama-91th Septemba 23. Isiqubulo salo nyaka weSuku lweSizwe laseSaudi sithi "Ikhaya Lethu".
USuku lweSizwe laseSaudi lubhiyozelwa kunye imidaniso yesintu, iingoma, kunye nemibhiyozo yesiko. Iindlela kunye nezakhiwo zihonjiswe ngeeflegi zaseSaudi, kwaye abantu banxibe imibala yesizwe eluhlaza namhlophe, kwaye babonisa iibhaluni ngokufanayo.
ISaudi Arabia, ngokusemthethweni uBukumkani baseSaudi Arabia, lilizwe elikwiNtshona yeAsia. Inqumla uninzi lwePeninsula yaseArabia, enomhlaba omalunga ne-2,150,000 km². ISaudi Arabia lelona lizwe likhulu eMbindi Mpuma, kwaye lelona lizwe likhulu ngobukhulu kwilizwe lama-Arabhu.
Ukhenketho lubonwa njengombono wale mihla wokukhula okutsha.
Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho libhengeze ukuba uBukumkani buzivulile iingcango zabo kubakhenkethi bamanye amazwe kwaye bashenxise ukumiswa kokungena kwabanini bevisa visa ukuqala nge-1 Agasti 2021.
Ubukumkani butyale imali kwezokhenketho ngendlela enkulu. Oyena mntu uxhasa umbono wezokhenketho ngumphathiswa onengqondo yokwenene yelizwe jikelele, oHloniphekileyo uMnu. Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Ungumphathiswa Wezokhenketho eSaudi Arabia. Uneminyaka engaphezu kwama-25 yamava kutyalo-mali nakwiinkonzo zezezimali, apho athe waseka, waphatha, kwaye wahlengahlengisa inani leearhente zikarhulumente kunye neenkampani. Uyaziwa ngokukwazi kwakhe ukukhokela inguqu kwiziko kunye nokufezekisa imibono yexesha elizayo ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
Okwangoku, uphethe izikhundla
Usihlalo weBhodi yaBaphathi yeGunya lezoKhenketho laseSaudi.
Usihlalo weBhodi yaBalawuli yeNgxowa-mali yoPhuhliso lwezoKhenketho.
Usihlalo weKomiti yeNkqubo yoMgangatho woBomi
Usihlalo weBhodi yaBalawuli yeNgxowa-mali yoPhuculo yaseSaudi
Usihlalo weBhodi yaBalawuli be-Saudi Arabia Arabia Industries (SAMI).
UNobhala Jikelele kunye neLungu leBhodi yaBalawuli okanye iGunya loPhuhliso lweSango laseDiriyah
UNobhala Jikelele kunye noSekela Sihlalo weBhodi yaBalawuli yeDolophu eNtsha yaseJeddah
Ilungu leBhodi yaBalawuli yeNgxowa-mali yoTyalo-mali kaRhulumente.
Ilungu leBhodi yabaLawuli yoMbutho Jikelele waMashishini oMkhosi.
Ilungu leBhunga leMicimbi yezoQoqosho noPhuhliso.
Ilungu leBhodi yabaLawuli beNkampani yeNeom.
Ilungu leBhodi yaBalawuli yeNkampani yoPhuhliso loLwandle oluBomvu.
Ilungu leBhodi yaBalawuli yeNgxowa-mali yoPhuhliso yeSizwe.
Utyalo-mali kwicandelo lezokhenketho yenye yeentsika zombono waseSaudi 2030 kunye nobungqina bokuzingisa ukuqhubela phambili ukuze ufezekise iinjongo kunye neenjongo zawo:
Utyalo-mali kwicandelo linegalelo ekudaleni amathuba otyalo-mali anenzuzo kubatyali mali basekhaya nabangaphandle.
Asiluthatheli ingqalelo ukhenketho njengomqhubi kuphela wokukhula koqoqosho, kodwa njengebhulorho kunxibelelwano lwenkcubeko kunye nehlabathi, elinokuphucula umgangatho wokuqonda kunye nentlonipho ngokudibeneyo.
Ezokhenketho lelinye lawona macandelo akhula ngokukhawuleza kwihlabathi. Kule minyaka isibhozo idlulileyo, icandelo lezokhenketho liye landa ngomndilili ongaphezulu komndilili wehlabathi.
Ngokwezibalo zeBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho, eli candelo linegalelo kwipesenti ezilishumi kwimveliso yelizwe jikelele (GDP).
Kunyaka ophelileyo, izinga lokukhula kwabakhenkethi belimi kwi-3.9 yepesenti, ngelixa uqoqosho lwehlabathi lufumene iipesenti ezi-3.2.
Kulindeleke ukuba icandelo lezokhenketho likhule nge-3.7 pesenti nge-2029, eya kuthi inegalelo ngaphezulu kwe-13 yezigidigidi kuqoqosho lwehlabathi olingana ne-11.5 pesenti ye-GDP yehlabathi.
Icandelo lezokhenketho lixhasa imisebenzi ezizigidi ezingama-319 kwihlabathi liphela - ejikeleze omnye wemisebenzi elishumi kwihlabathi liphela- kwaye linoxanduva lokudala umsebenzi omnye kwimisebenzi emihlanu ebonelelwe kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Kwinqanaba lehlabathi, icandelo lezokhenketho lithathwa njengelona lipheleleyo ngokuthatha inxaxheba kwelona nani likhulu lolutsha kunye nabasetyhini xa kuthelekiswa nabasebenzi bebonke.
Umsebenzi uyaqhubeka wokuphuhlisa iziseko ezingundoqo kunye neenkonzo eBukumkanini ngeenjongo zokuhlangabezana neemfuno ezandayo ngendlela ehambelana necebo lezokhenketho eBukumkanini:
Amagumbi ehotele ayi-150,000 ewonke aya kwakhiwa kule minyaka mithathu izayo. Iipesenti ezingama-70 zezi hotele ziya kuphunyezwa licandelo labucala.
-Ubukumkani, ngokusebenzisana nabatyali mali basekhaya nabangaphandle kunye neengxowa mali zotyalo-mali lwasekhaya, kubandakanya neNgxowa-mali yoPhuculo loKhenketho, bafuna ukuseka amagumbi eehotele angama-500,000 kulo lonke elasebukhosini ngo-2030.
Iimemorandam ezininzi zokuqonda ezinexabiso elipheleleyo elingaphezulu kweebhiliyoni ezili-115 zeeriyali zaseSaudi zisayiniwe ukuphucula iziseko kunye nokwandisa inani lamagumbi ehotele akhoyo.
-Ubukumkani bufuna ukonyusa umthamo wokungena kwezikhululo zeenqwelo moya zoBukumkani ngaphezulu kwe-100 lezigidi abakhweli ngonyaka.
Okwangoku izinto ezijamelene neSaudi Arabia:
Ukudodobala kwezoqoqosho okubangelwe ngulo bhubhane kulichaphazele kakhulu icandelo lezokhenketho, ingakumbi icandelo lezokundwendwela nelamahotele.
Ukwehla kwabakhweli zizigidi ezingama-26.
Kukho imisebenzi engama-200,000 echaphazelekayo kwicandelo.
Ubukumkani buye banikela ngamanyathelo okuxhasa uqoqosho ngezigidi ezili-120 zeeriyali zaseSaudi.
IiSaudis kwicandelo zixhamle kweli nyathelo lokuxhasa imivuzo ngurhulumente.
Ubukumkani buqalise inyathelo lokuxhasa imivuzo yabakwaSaudi kumacandelo abucala ngexabiso elipheleleyo le-9 yezigidi zeerali zaseSaudi. Le nkxaso ikwajolise kwicandelo lezokhenketho.
Ithuba linikezelwe ngenkqubo yeAjeer yokutshintshiselana ngezibonelelo phakathi kwamancedo ukunciphisa umda.
Imirhumo enxulumene nokhenketho kunye noomasipala iye yehliswa.
Iihotele zamkele ngaphezulu kwama-50,000 13,000 abemi ababuyele eBukumkanini ngeli linge "lokubuya kommi", apho babebanjelwe ngaphezu kwamagumbi eehotele ali-XNUMX ixesha eliphakathi kweveki enye ukuya kwezimbini.
Ngenjongo yokukhuthaza ukhenketho lwasekhaya, uBukumkani buphehlelele iXesha lehlobo laseSaudi eligubungela iindawo zabakhenkethi ezili-10 kwilizwe liphela.
Isicwangciso sezoKhenketho eBukumkanini
Ubukumkani buqinisekisile isicwangciso-qhinga sesizwe sokhenketho, esiqaqambise imigca ephambili yomnqweno wecandelo ohambelana neenjongo zeSaudi Vision:
Sijonge ukwandisa igalelo lecandelo lezokhenketho kwi-GDP ukusuka kwizinga langoku leepesenti ezi-3 ukuya ngaphezulu kwepesenti ye-10 ngowama-2030.
Icandelo lezokhenketho lijolise ekudaleni imisebenzi eyongezelelweyo esisigidi ukufikelela kwi-1.6 yezigidi zemisebenzi kwicandelo lokhenketho ngowama-2030.
Sijolise ekutsaleni utyelelo lwasekhaya nolwamazwe ngamazwe kwizigidi ezili-100 ngonyaka ngowama-2030.
Ubukumkani buqalise i-visa yabakhenkethi ngoSeptemba 2019, apho abemi bamazwe angama-49 banokufumana i-visa ngombane, ngelixa abaphathi be-US, UK kunye ne-Schengen visa banokufumana i-visa xa befika, kwaye izifundo zamanye amazwe zinokufaka isicelo sokufumana i-visa ngokundwendwela abameli boBukumkani kumazwe abo.
Amazwe angama-49 axabisa malunga neepesenti ezingama-80 zenkcitho yabakhenkethi kwihlabathi liphela kwaye abamba malunga neepesenti ezingama-75 zabafuna ukhenketho lobunewunewu kwihlabathi.
Ukhenketho loTyalo-mali kubakhenkethi
• Zithini iinjongo zokuseka iNgxowa mali yoTyalo-mali kubakhenkethi?
-Ukuseka iNgxowa-mali yoTyalo-mali kubakhenkethi ijolise ekuvuseleleni utyalomali kubakhenkethi, kwahluka iindlela zokufumana umvuzo, kwandiswe igalelo kwicandelo lezokhenketho kwi-GDP, kunye nokudala imisebenzi engakumbi yamadoda nabasetyhini baseSaudi kwicandelo lezokhenketho, kunye nokwenza igalelo ekwamkeleni abakhenkethi abaninzi eBukumkanini ngokweenjongo zesicwangciso-qhinga sesizwe sezokhenketho kunye ne-Saudi Vision 2030.
• Zeziphi izixhobo eziza kusetyenziswa yingxowa-mali ukuxhasa nokutsala utyalo-mali kubakhenkethi?-Ingxowa-mali yoTyalo-mali yabakhenkethi isekwe nge-capital ye-15 yezigidi zeerali. Ingxowa-mali ikwatyikitye iimemoranda zokuqonda kunye neebhanki zalapha ukuxhasa ngemali iiprojekthi zabakhenkethi ubuncinci i-150 yezigidi zeerali zaseRaudi.
Le ngxowa-mali, ibambisene neebhanki zotyalo-mali, iseke imali yokutyala imali kumacandelo okhenketho.
• Ngawaphi amathuba otyalo-mali anikezelwa yingxowa-mali?
- Enye yeenjongo ezibaluleke kakhulu kwingxowa-mali kukuxhasa nokukhuthaza utyalomali kubakhenkethi eBukumkanini.
Ngale ndlela, ingxowa-mali ivula imiba yokusebenzisana nabatyali-mali ngokuthe ngqo ngokubanika inkxaso kuyo nantoni na enxulumene neeprojekthi zabakhenkethi ezinokukhokelela kuphuhliso lwecandelo lezokhenketho kwiindawo ezahlukeneyo zobukumkani, kubandakanya neendawo ezahlukeneyo, ezinje ngeehotele, iivenkile zokutyela kunye nokuphuhlisa Iindawo zabakhenkethi, ukubuk 'iindwendwe ngokubanzi kunye nabaququzeleli bohambo.
Le ngxowa-mali ikwafuna ukwenza indawo yotyalo-mali ukuba ibe nomtsalane ngakumbi kumashishini abucala kwaye inike nenkxaso yokufumana izibonelelo ezinenzuzo ngakumbi, ethi idale amathuba amakhulu otyalo-mali eBukumkanini ngokulungisa indawo yabakhenkethi ngendlela ehambelana necebo lesizwe lezokhenketho.
Ngaphaya koko, iimali ziyonwabela indima ephambili ekuphuhliseni ishishini lokhenketho ngokubanzi kunye nokukhuthaza ngakumbi
Amadoda nabasetyhini baseSaudi ukuba bazibandakanye kweli candelo ngeenjongo zokubonelela ngemisebenzi emitsha esisigidi ngo-2030, ukongeza ekonyuseni igalelo kwicandelo lezokhenketho eBukumkanini ukuya kwiipesenti ezili-10 ngowama-2030 ukunyuka kwinqanaba langoku leepesenti ezi-3, kwaye uceba ukufumana utyelelo lwabakhenkethi abazizigidi ezili-100.
• Zithini izisombululo zezemali ezibonelelwa yingxowa-mali?
- Ingxowa-mali ixhasa icandelo labucala ngokunikezela ngeemali-mboleko zotyalo-mali, kunye notyalo-mali kwiiprojekthi ngokuba nezabelo kwezi nkqubo. Ingxowa-mali ikwabonelela ngesiqinisekiso kwezinye iiprojekthi.
Inkxaso ikwanikezelwa kwezinye iimeko kwiiprojekthi ezibalaseleyo nezingoovulindlela ngokunika zonke izisombululo esele zikhankanyiwe. Ingxowa-mali, ngokusebenzisana neearhente zikarhulumente ezifanelekileyo, inegalelo ekuboneleleni ngomhlaba othile weeprojekthi ezibalulekileyo nezibalulekileyo.
Indawo yeNgxowa-mali yoPhuhliso lwezoKhenketho